Manchester United – Football
Home / England / Premier League / Manchester United
April 29, 2018	Arsenal, Manchester United, Premier League Comments Off on အာဆင်​ဝင်းဂါးနှင့်​မန်​ယူအသင်းရဲ့ အိုးထရပ်​ဖို့ကွင်းထဲကအမှတ်​တရများ
Zawgi အာဆင်​နယ်​နည်းပြကြီး အာဆင်​ဝင်းဂါးရဲ့ အာဆင်​နယ်​နည်းပြသက်​တမ်းဟာ အခုရာသီကုန်​မှာ ပြီးဆုံး​တော့မှာဖြစ်​ပါတယ်​။အာဆင်​ဝင်းဂါးဟာ အာဆင်​နယ်​နည်းပြဘဝတစ်​​လျှောက်​ ဆုဖလား​အောင်းမြင်​မှု​တွေကို အ​စောပိုင်းနှစ်​​တွေမှာ ပိုမိုရရှိခဲ့ကာ ​နောက်​ပိုင်းနှစ်​​တွေမှာအောင်​မြင်​မှုအဖြစ်​ အက်​ဖ်​​အေဖလားပြိုင်​ပွဲတစ်​ခုသာပြစရာရှိခဲ့ပါတယ်​။ အာဆင်​ဝင်းဂါးဟာ နည်းပြသက်​တမ်းတစ်​​လျှောက်​ မန်​ယူအသင်းနှင့်​ပြိုင်​ဘက်​အဖြစ်​အကြိမ်​ကြိမ်​ရင်​ဆိုင်​ရဖူးပြီး ​နိုင်​ပွဲ​တွေကျရှုံးမှု​တွေလည်းမျိုးစုံကြုံဖူးထားပါတယ်​။ အာဆင်​ဝင်းဂါးရဲ့ မန်​ယူအသင်းနဲ့ရင်​ဆိုင်​ခဲ့တဲ့မှတ်​တမ်းက​တော့ ပွဲ(59) နိုင်​(19) သ​ရေ(13) ရှုံး(27) ဖြစ်​ပါတယ်​။ အာဆင်​နယ်​အသင်းနဲ့ မန်​ယူအသင်းတို့ရဲ့ ​ကျော်​ကြားတဲ့ပွဲစဉ်​​တွေကို ပြန်​ကြည့်​မယ်​ဆိုလျှင်​…. ••••2001-2002 ပရီးမီးယားလိဂ်​•••• မန်​ယူအသင်းရဲ့အိမ်​ကွင်း အိုးထရပ်​ဖို့ကွင်းထဲမှာ အာဆင်​နယ်​အသင်းအနိုင်​ရရှိကာ မန်​ယူအသင်းဆက်​တိုက်​ရ​နေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်​ဖလားကိုရရှိခဲ့ပါတယ်​။ ••••2005 အက်​ဖ်​​အေဖလား ဗိုလ်​လုပွဲ •••• အာဆင်​နယ်​နဲ့မန်​ယူတို့ ၁၂၄ကြိမ်​​မြောက်​အဖြစ်​ ​​တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပင်​နယ်​တီမှာ အာဆင်​နယ်​အသင်းက ၅-၄ ဂိုးနဲ့ နိုင်​ပြီးဖလားရရှိခဲ့ပါတယ်​။ ••••2011 အိုးထရပ်​ဖို့က 8-2ပွဲ …
February 24, 2018	Manchester United, Premier League Comments Off on မန်ယူမှာနေရာပျောက်နေတဲ့ မာရှယ်ကိုခေါ်ယူချင်နေတာကဘယ်အသင်းတွေလဲ?
zawgyi စပိန်ထိပ်တန်းကလပ်ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းဟာ လာမယ့်နွေရာသီဈေးကွက်မှာတော့ မန်ယူအသင်းတောင်ပံ ကစားသမား မာရှယ်ကိုခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ The sun ရဲ့အဆိုအရတော့ မော်ရင်ညိုအနေနဲ့ မာရှယ်ရဲ့အသင်းမှာ ကစားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကျော်က ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့တော့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လက်ရှိအချိန်အထိတော့ မာရှယ်ရဲ့အနေအထားဟာ ထူးခြားမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် လည်း စပါးစ်အသင်းကလည်း မာရှယ်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ပြင်သစ်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာလည်း မာရှယ်အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်အထိတော့ အသင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ထပ်မံချုပ် ဆိုဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းမှုတွေလုံးဝရရှိထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ မန်ယူအသင်းကို တိုက်စစ်မှူးဆန်းချက်ဇ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တောင်ပံကစားသမားမာရှယ်ဟာ ကစား ခွင့်တွေဟာကန့်သတ်မှုရှိသွားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး ၄ ပွဲမှာ ၃ ပွဲကအရန်ခုံကနေပါဝင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မာရှယ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် ရီးရဲမက်ဒရစ်၊ စပါးစ်အသင်းအပြင် စီးရီးအေကလပ် အင်တာမီလန်အသင်း တို့ကလည်း စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မာရှယ်အနေနဲ့ မန်ချက်စတာမှာ …
February 23, 2018	Article, Manchester United, Premier League Comments Off on မန်ယူနဲ့စာချုပ်သစ်ထပ်မံချုပ်ဆိုဖို့ ဒီဂီယာနီးစပ်
zawgyi မန်ယူအသင်းဂိုးသမားဒီဂီယာဟာ အသင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ထပ်မံချုပ်ဆိုဖို့ နီးစပ်နေပြီလို့ သတင်းတွေ ထွက် ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီဂီယာဟာ မန်ယူအသင်းနဲ့အတူ လက်စွမ်းပြကစားနေခြင်းတွေကြောင့်လည်း စပိန်ထိပ်တန်းကလပ် ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းကနေခေါ်ယူဖို့အတွက် အဆက်မပြတ်ခေါ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းခြင်းခံထားရသူလည်းဖြစ် ပါတယ်။ ဒီဂီယာရဲ့လက်ရှိစာချုပ်သက်တမ်းကတော့ ၂၀၁၉ မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး ထပ်မံချုပ်ဆိုမယ့်စာချုပ်အရ တစ်ပတ်ပေါင် ၂၂၀၀၀၀ ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ဒီဂီယာနဲ့ မန်ယူအသင်းတို့ ရဲ့ စာချုပ်သစ်အတွက်ဆွေးနွေးမှုဟာအဆင်ပြေချောမွေ့နေပြီး မကြာခင်စာချုပ်သစ်မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ ရှိနေပြီလည်း The time သတင်းစာက ဆိုထားပါတယ်။ ဒီဂီယာဟာ ၂၀၁၁ခုနှစ်ကစတင်ကာ အက်သလက်တီကိုအသင်းကနေ မန်ယူအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ unicode မနယှူနဲ့စာခှုပသှစထှပမှံခှုပဆှိုဖို့ ဒီဂီယာနီးစပှ မနယှူအသငှးဂိုးသမားဒီဂီယာဟာ အသငှးနဲ့စာခှုပသှစထှပမှံခှုပဆှိုဖို့ နီးစပနှပှေီလို့ သတငှးတှေ ထှကှ ပေါနှပေါတယှ။ ဒီဂီယာဟာ …
February 23, 2018	Article, Manchester United Comments Off on Youtube မှာတရားဝင် ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုစတင်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက် နာရီ ၂၀ အတွင်း subscribe လုပ် သူပေါင်း ၁သိန်းခွဲနီးပါးရှိလာခဲ့တဲ့ မန်ယူ
zawgyi မန်ယူအသင်းဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် Youtube နဲ့တော့ အဆက်အသွယ်မရှိခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ မန်ယူအသင်းဟာ youtube channel ကနေ အသင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို တင်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတွေထဲမှတော့ youtube နဲ့ ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးအသင်းလို့လည်းပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့မန်ယူအသင်းဟာ youtube မှာတော့ အရှာခံရအများဆုံး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံး အသင်းတစ်သင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာတော့ တရားဝင်ဘောလုံး channel (MUTV)ကို ပထမဦးဆုံး ထုတ် လွှင့်တဲ့ အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ထုတ်လွှင်ခဲ့တာကတော့ ၁၉၉၈ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ youtube မှာတော့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါင်း ၈၀ ကျော်လောက် တင်ထားပြီး လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကစားသမားတွေရဲ့လုပ်ရှားမှုတွေ၊ …
အရေးပါတဲ့ ကာကွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ ဒီဂီယာ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်
February 22, 2018	Champions League, Featured, Manchester United Comments Off on အရေးပါတဲ့ ကာကွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ ဒီဂီယာ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်
zawgyi 1 မန်ယူအသင်းနှင့် ဆီဗီးလ်တို့ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့် ရှုံးထွက်ပထမအကျော့ ကစားခဲ့ရာမှာ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပြီး အဲဒီပွဲစဉ်မှာ အရေးပါတဲ့ ဂိုးကာကွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေနပ်မိကြောင်း မန်ယူအသင်းဂိုးသမား ဒီဂီယာက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစဉ်မှာ ဆီဗီးလ်ကစားသမား မူရီယယ်ရဲ့ အနီးကပ်ခေါင်းတိုက် ဂိုးသွင်းယူရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကို ဂိုးသမားဒီဂီယာက အံ့အားသင့်စရာအနေအထားမျိုးနဲ့ ကာကွယ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအနေအထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ဒါက ပထမပိုင်း ပွဲပြီးခါနီး နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ ပွဲတစ်ပွဲအတွက် အရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုပါ။ အဲဒါကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့လည်း ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ဆီဗီးလ်တို့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေး ရခဲ့တာလို့ ထင်ပါတယ်။ အသင်းရဲ့ ခံစစ်က ကောင်းမွန်မှုရှိခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် …
ပေါ့ဂ်ဘာနဲ့ မော်ရင်ညိုတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုဆုံးမှာလဲ။ ဆီဗီးလ်နဲ့ပွဲမှာလည်း ချန်လှပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ။
February 22, 2018	Featured, Manchester United Comments Off on ပေါ့ဂ်ဘာနဲ့ မော်ရင်ညိုတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုဆုံးမှာလဲ။ ဆီဗီးလ်နဲ့ပွဲမှာလည်း ချန်လှပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ။
zawgyi 1 ဆီဗီးလ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာလည်း အရန်ခုံမှာထိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပေ့ါဂ်ဘာနဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့ အနာဂတ်တို့ဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီပွဲစဉ်မှာလည်း မော်ရင်ညိုဟာ ပေါင် ၈၉ သန်းတန် ပေါ့ဂ်ဘာကို ပွဲထွက်ခွင့် ချန်လှပ်ခဲ့ပြီး သူ့နေရာမှာ လူငယ်ကစားသမား တူမီနေးကိုထည့်သွင်း အသုံးပြုခဲ့ပြန်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမစတင်ခင်ကတည်းက မော်ရင်ညိုက ဖျားနားမှုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာကို ပွဲထွက်ခွင့် ပြုဖို့မရှိဘူးလို့ ပြောဆိုထားမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ “တိုမီနေးက အလုပ်ကိုလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြိုးစားနေသူဖြစ်သလို ကြံ့ခိုင်မှုလည်း ကောင်းနေပုံပါ။ ဒ့ါအပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်း ပွဲချိန်ပြည့်ကစားထားခဲ့တာပါ။ ပေ့ါဂ်ဘာကတော့ စနေနေ့ကပွဲမှာ ပါဝင်ကစားနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပွဲတွေမှာ ကစားသမားတွေရဲ့ အနေထားကလည်း ရာနှုန်းပြည့်ကြံ့ခိုင်မှုရှိနေဖို့ လိုတယ်လို့ လက်ခံထားပါတယ်။ စနေနေ့ပွဲမှာ ပေါ့ဂ်ဘာက …
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမတိုင်ခင် ဆန်းချက်ဇ်တို့ စုံတွဲ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ။
February 20, 2018	Article, Manchester United, Premier League Comments Off on ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမတိုင်ခင် ဆန်းချက်ဇ်တို့ စုံတွဲ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ။
zawgyi မန်ယူအသင်းတိုက်စစ်မှူးဆန်းချက်ဇ်အတွက်တော့ အာဆင်နယ်ကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တာ ကြောင့် လန်ဒန်မြေသူအတွက်အသားကျပေမယ့် မန်ချက်စတာကတော့သူ့အတွက် တစိမ်းဆန်နေပါသေး တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆန်းချက်ဇ်ဟာ အားလပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ မန်ချက်စတာမြို့ထဲကို ချစ်သူနဲ့လိုက်လှည်နေခဲ့ပါတယ်။ ဆန်းချက်ဇ်ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးညမှာကစားရမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် တနင်္လာနေ့ညမှာတော့ ချစ်သူနဲ့အတူ မန်ချက်စတာမြို့လယ်မှာ လှည်ပတ်နေခဲ့တဲ့ ပုံတွေကိုလည်း သူရဲ့ချစ်သူ မေတီရိုဒရီဂေးဇ်ရဲ့အကောင့်မှာ ဓါတ်ပုံတွေထင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာ namco Funscape စင်တာမှာတော့ တစ်ခါစီး ၃ ပေါင်သာ ပေးရတဲ့တိုက်ဂါးစီးပြီး ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးအဆင့်မှာတော့ ဆီဗီးလ်ကွင်းမှာသွားရောက်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး တိုက်စစ်မှူးဆန်းချက်အတွက်တော့ ပထမဦးဆုံးချန်ပီယံလိဂ်မှာပါဝင်ကစားမယ့်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ ဟတ်ဒါဖီးလ်အသင်းနဲ့ပွဲမှာ အဖျားရောဂါကြောင့်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်မရခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်မှူးပေါ့ဂ်ဘာလည်းအသင်းမှာ ပြန်လည်ပါဝင်ကစားဖို့ရှိနေပါတယ်။ unicode 1 ခနှပှီယံလိဂပှဲမတိုငခှငှ ဆနှးခကှဇှတှို့ စုံတှဲ ဘာလုပနှကှတောလဲ။ မနယှူအသငှးတိုကစှစမှူးဆနှးခကှဇှအှတှကတှော့ …
February 18, 2018	Featured, Manchester United Comments Off on မန်ယူအသင်းအတွက် အားတက်စရာ စကားလုံးကို ပြောလိုက်တဲ့ ဒီဂီယာ
zawgyi 1 ဒီရာသီကုန်ရင် ရီးရဲမက်ဒရစ်က ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်လာဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ ဒီဂီယာကတော့ မန်ယူအသင်းမှာ ပျော်နေပြီလို့ ပြောဆိုိလိုက်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာ ၇ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီဂီယာဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ မန်ယူအသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ကစားသမားများအနက် တစ်ဦးအဖြစ်လည်း ရှိနေသူပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဒီဂီယာကို မီဒီယာတစ်ခု မန်ယူအသင်းရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့မှုကိုတော့ ဒီဂီယာက “ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် အနာဂတ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြာခဏဆွေးနွေးတာမျိုးတွေ လုပ်တာက ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိကတော့ နေသာထိုင်သာရှိဖို့၊ ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်ဖို့နဲ့ မန်ယူအသင်းကို ကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်တွေ မြန်ပါတယ်။ …
မန်ယူအသင်းက ရိုဟိုနဲ့ကိစ္စတုန့်ဆိုင်းနေမှုအပေါ်အခွင့်အရေးယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ
February 18, 2018	Manchester United, Premier League Comments Off on မန်ယူအသင်းက ရိုဟိုနဲ့ကိစ္စတုန့်ဆိုင်းနေမှုအပေါ်အခွင့်အရေးယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ
zawgyi မန်ယူအသင်းမန်နေဂျာမော်ရင်ညိုက နှစ်သက်မှုမခံရတာကြောင့်အသင်းနဲ့စာချုပ်သစ် ထပ်မံချုပ်ဆို့ ကြန့်ကြာနေတဲ့ ခံစစ်မှူးရိုဟိုကို ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေ ပါ တယ်။ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကတော့ နွေရာသီဈေးကွက်မှာ အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရိုဟိုကို ပေါင်သန်း ၃၀ နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာတော့ တောင်အမေရိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ နေမာ၊ဒန်နီအဲဗက်စ်တို့ကိုခေါ်ယူထားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ဒီမာရီယာရဲ့နိုင်ငံအသင်း ကစားဖော်ရိုဟိုပြင်သစ်သို့ထပ်မံခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ် ပါတယ်။ ရိုဟိုရဲ့လက်ရှိအသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကလည်း ၁၈လကျန်သေးပေမယ့် ပီအက်စ် ဂျီက တော့အရခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်း တွေ ထဲမှတော့ မန်ယူအသင်းက ရိုဟိုကိုစာချုပ်သက်တမ်း ၁ နှစ်သာထပ်မံချုပ်ဆိုဖို့ဆန္ဒရှိနေ ပေမယ့် ရိုဟိုကတော့အသင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆက်လက်ရှိနေချင်တာ ကြောင့် စာချုပ်သစ်ထပ်မံချုပ်ဆိုရေးမှာ တုန့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ unicode 1 မနယှူအသငှးက ရိုဟိုနဲ့ကိစစှတုနှ့ဆိုငှးနမှေုအပေါအှခှငှ့အရေးယူဖို့ ကှိုးစားနတေဲ့ ပီအကစှဂှီ မနယှူအသငှးမနနှဂှောမောရှငညှိုက နှစသှကမှုမခံရတာကှောငှ့အသငှးနဲ့စာခှုပသှစှ …